Burkinaafaasootti balaa shororkeesitoonni qaqabsiisaniin loltoonni mootummaa 24 lubbuun darbaan – Fana Broadcasting Corporate
Burkinaafaasootti balaa shororkeesitoonni qaqabsiisaniin loltoonni mootummaa 24 lubbuun darbaan
Finfinnee, Hagayya 15,2011 (FBC) – Burkinafaasoo bulchiinsa kibba Saa’uum balaa shoroorkeesitoonni qaqqabsiisaniin looltoota mootumaa 24 lubbuun darbe.
Ministeerri Waraanaa biyyatti akka beeksisetti gareen hidhatanii socho’aan buufata waraanaa giddugaleessa Saa’uum argamurratti balaa shoroorkeessummaa qaqabsiisaniin hanga ammatti loltoonni 24 lubbuun darbaaniiru jedhan.
Balaa qaqqabeen loltoota du’aniin cinaatti, loltoonni 7 irra miidhaa cimaan yoo ga’u, loltoonni 5 ammoo hanga ammaatti eessa akka ga’an hin beekkamne.
Gareen hidhate socho’u kun meeshaa waraanaa cimaatti kan fayyadamaan yoo ta’u, balaa kanaaniis giddugalli waraanaa kun irra caalaan isaa abiddaan gubateera.
Balichaan walqabatee humni waraanaa biyyatti waraana lafoo fi qilleensa deeggaramee garee balaa kana qaqqabsiise irratti tarkaanffi fudhachaa kan jiru yoo ta’u, tarkaanfii fudhatameen garee hidhatanii socho’aan hedduun kan du’an ta’uu gabaafameera.
Biyyoonni miseensa ECOWAS shoroorkeessitoota naannicha keessa jiru rukutuuf doolaara…
Dooniin Demookiraatik Koongoo dhidhimuun lubbuun namoota 34 darbe
Sudaanonni lammiile saba mormiin du’aniif haqa gaafatan
Balaa ibiddaa Hoospitaala Braazil irra ga’een lubbuun nama 9 darbe
Irreechi Hora Finfinnee sirna ho’aan ni kabajama…
Biyyoonni miseensa ECOWAS shoroorkeessitoota naannicha…
Warri kafaa muuxannoo Qabeenya uumama kunuunsuu qaba –…